Funda indlela kunye nexesha lokusebenzisa iFransi ngokuNxaxheba
Inxalenye yesiFrentshi ithatha inxaxheba kwisenzi sesenzi esiphelela kwi-- ant . Kuqheleke kakhulu kunomlingani wesiNgesi, ophelela kwi-to. Inxalenye yesiFrentshi inxaxheba inokuba isichazi, i-gerund, isibizo, okanye isenzi. Ngaphambi kokuba usebenzise izinto ezithile ezikhoyo, kukho izinto ezine abafundi baseFransi kufuneka bazi ukuze baphephe iimpazamo eziqhelekileyo .
Inxalenye yesiFrentshi inxaxheba inokuze isetyenziswe ukuthetha ngento eyenziwa ngumntu. Ukwakhiwa "je suis mangeant" (inguqulelo yegama "Ndiyadla") ayikho eFrentshi nje - kufuneka usebenzise ixesha langoku : je mange . Ukugxininisa uhlobo oluqhubekayo lomsebenzi, ungasebenzisa intetho yesiFrentshi ukuba ifunde : i- train station yokutya - "Ndiyidla (ngoku ngoku).
Inxalenye yesiFrentshi ithatha inxaxheba ayinakusetyenziswa emva kwesinye isenzi. "Ndiyathanda ukusila" ayikho; ukuba "Ndiyakuthanda ukufunda," kufuneka usebenzise i- infinitive : j'aime lire.
Ukusetyenziswa kwesiNgesi kwale nto kubandakanyeka njengesibizo esibonisa umsebenzi, njengokuthi "Ukubona kukholwa," yile imeko apho iinguqulelo zesiFrentshi ifuna ukungapheliyo: Bona, c'est croire. Ngamanye amaxesha unokusebenzisa nje igama; ukuguqulela "Ukufunda kumnandi," unokhetho oluninzi : uLire unomdla, uLadio uyingonwabi .
Njengesenzi okanye i-gerund, inxaxheba isingenakwenzeka, ngaphandle kweemeko zesenzi , ezigcina isistim esilungeleyo sokubakho phambi kwelo xesha sithatha inxaxheba: i- coiffant (yenza izinwele zam), e-us levant (phezu kwethu] phezulu), njl
Yenza inxaxheba njengeLwimi okanye iGerund
Xa isetyenziswe njengesenzi, amaFrentshi abandakanyekayo athatha inxaxheba esichazela isenzo esifanayo kunye, kodwa kungekhona ngokubhekiselele kuyo, isenzo sesenzi esona.
Kukho iindlela ezimbini zokusetyenziswa kwesi siFrentshi: ukuguqula isibizo okanye ukuvakalisa isenzo esihambelana nesenzi esona.
1. Guqula igama:
Eyona nto ingozi, andiyi-allé. Ukwazi ingozi, andizange ndihambe.
Ayantsile, i-mangé tout le gâteau. Ukulamba, wadla yonke ikhekhe.
Un fille, umlindi un livre, is venue au café. Intombazana efunda incwadi yafika kwivenkile.
Ndiyayibona i-acheter des livres. Ndambona ethenga ezinye iincwadi.
2. Ukuvakalisa isenzo esihambelana nesenzi esona.
Le nxaxheba ithatha inxaxheba, ebizwa ngokuthi i -gérondif , okanye "i-gerund," phantse ilandele njalo i- preposition en . Ingakwazi ukulungiselela ezintathu injongo:
a) Chaza isenzo esichaphazelekayo kunye kunye nesenzo sesenzi esitsha, ngokuqhelekileyo siguqulelwe ngokuthi "ngexesha" okanye "kwi:"
Elle lisait en mangeant. Wafunda xa edla.
Xa ubona izimbali, u-pleuré. Xa ebona iintyatyambo, wakhala.
Il ne peut pas parler en worker. Akakwazi ukuthetha ngelixa esebenza.
b) Chaza indlela okanye kutheni kwenzeka into ethile, ngokuqhelekileyo iguqulelwe "ngu":
Kungenxa yokuba nithanda ukuba nilungile. Kukukwenza ukuba wenze kakuhle.
Unomntu owenza umdlalo omkhulu. Wayemncinci ngokugqithisa kakhulu.
Ng enhabillant vite, i-winner imizuzu emi-5. Ngokungxiba ngokukhawuleza, ndagcina imizuzu emi-5.
c) Faka isahlulo sesiqhelo :
abafundi abavela e-Afrika (abavela e-Afrika) abafundi abavela e-Afrika
abagqirha bashumayela isiFrentshi (abavakalisa isiFrentshi) oogqirha abathetha isiFrentshi
amalungu afuna ukuhamba (afuna ukuhamba) malungu afuna ukuhamba
Ukuthatha inxaxheba ngokumalunga noGerund
Ukwahlula phakathi kwe-A no-B kukuba inxaxheba ithathe iinguqu, kanti i-gerund ibonisa into ehlobene nesenzi.
Ukwahlukana kwangoko kubonakala kwimimiselo elandelayo:
Ndabona uLuc uhla lwe-école.
Ndabona uLuc eshiya isikolo (ndambona njengoko wayehamba)
> Isibizo uLu sitshintshisiwe, ngoko kuhlanjululwa yile nxaxheba.
Ndabona uLuc enhlelweni lwe-école.
Ndabona uLuc xa eshiya isikolo (ndambona xa ndihamba)
> Isenzo sesenzi sitshintshile, ngoko ku-gerund.
Uthabatha inxaxheba njengesiXhosa okanye iNoun
Ngamanye amaxesha amaFrentshi abandakanyekayo athatyathwa njengesipelisi. Njengazo ezinye izichazi , inxaxheba esetyenziswayo ngale ndlela idla ngokulandela izibizo eziguqulela kwaye zivumelana nesibizo ngokwesini kunye nenani, ngokulandela imithetho eqhelekileyo yesivumelwane sesivumelwano :
le numéros iindwendwe
Iintetho zaseFransi zithatha inxaxheba zisenokuthi zisetyenziswe njengegama , kwaye ziphinde zilandele imigaqo eqhelekileyo yesini / yeenombolo zezibizo.
uncedisi - uncedisayo
ungumthengisi - umthengisi
ungumfundisi - utitshala
un student- student
umenzi womenzi - umenzi
unonophelo - ophumeleleyo
unxaxheba - inxaxheba
un savant * - nzu lulwazi
* Ezinye izenzi zineendlela ezahlukeneyo ezithatha inxaxheba esetyenzisiweyo njengesenzi kunye nesibizo okanye isichazi
Ukubunjwa kwe-French present presently is easy. Ukusetyenziswa rhoqo kunye neentetho ezintathu ezingaqhelekanga , inxaxheba yesiFrentshi ibandakanyeka ngokukhupha-iinjongo ezivela kwifom yethu yexesha langoku kunye nokongeza. Ezi zintathu zikhethiweyo zinayo , zikhona , kwaye ziyazi .
Khumbula ukuba izenzi zamagama , kufuneka ugcine isigammeli esifanelekileyo phambi kwesangoku nxaxheba : i- coiffant (ukwenza iinwele zam), en nous levant (phezu kwethu] ukunyuka), njl njl.
IsiFrentshi sithatha inxaxheba
isenzi umfundisi gqibela guqula bonayo ukuba kuba ukwazi
yethu ifom iipiloni gqibela iifayile iivoton unayo mali iitoni
kubakho inxaxheba ukutyumba gqibela gu qulela ukukhanya ekhoyo kuba sachant *
* Ulwazi kunye nenani lezinye izenzi zineenkcukacha ezimbini zokupasa ezikhoyo ngoku, ngokuxhomekeke kwindlela asetyenziswa ngayo - imizekelo:
upelo isenzi kubakho inxaxheba isichazi / isibizo
sichaza. iphelile umthengisi abachaphazelekayo eziphathekayo
ezahlukeneyo ahlukeneyo ezahlukeneyo
hlukana ezahlukileyo hlukana
ogqwesileyo ogqwesileyo kakhulu
umthumeli othunyelwayo thumela
phambili phambili yangaphambili
ulwaphulo ukuphulwa nyamelo
sichaza. iphela ekupheleni ncokola qha ga mshelana nxi be lelwano
ku kholisa zi kholisa kholisa
mveliso ezenzileyo mveliso
ku velisa othumayo ku vuthela
lileyo neleyo neleyo
sichaza. iphelile umthunywa ummeli utyumba
ukugqithisa ezigqithisileyo ziqatha
u diniwe unxinzekile unomdla
umdla umdla e nzulu
indlela yokuhamba zihamba ngeendlela ohamba ngeendlela
engavumelekanga ukwazi sachan
Indlela yokusebenzisa "iSan," "Kun," kunye ne "Chan" ngokuchanekileyo Xa uthetha isiJapane
Indlela yokudibanisa "iDepêcher" (ukukhawuleza)
Yintoni Isivumelwano Segrammatic IsiFrentshi?
Imbali yeCawa yamaLuthere
Izikolo eziPhakamileyo zeDiving Diving Competition
Amazwe aseUnited States angenaRhafu yeNgeniso kaRhulumente
Yintoni "Imali" Ethetha Ngomxholo Wezoqoqosho?
Ubunzima be-JFK kunye namanye amaQumrhu oPhephayo weeMpawu zeMbali